मोफसलमा पनि बढ्दै संक्रमण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मत्थर हुँदै गएको संक्रमण पुनः बिस्तारै उकालो लाग्दा परीक्षण र उपचार गराउन स्वास्थ्य संस्थामा चाप
श्रावण १४, २०७८ प्रदेश ब्युरो
काठमाडौँ — देशभर कोरोना संक्रमण फेरि विस्तार हुन थालेको छ । जसका कारण देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ । प्रदेश १ मा कोभिड–१९ परीक्षण गरिएकामध्ये ३० दशमलव ६३ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङको कोभिड उपचार केन्द्रमा उपचार गराइरहेका बिरामी । १० शय्याको केन्द्रमा नअटेका बिरामीलाई जनरल वार्डमा अरू बिरामीसँगै राख्दाजोखिम बढेको छ । तस्बिर : आनन्द गौतम/कान्तिपुर
संक्रमितमध्ये विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रका आईसीयू, भेन्टिलेटर, एचडीयू पूर्ण रूपमा भरिएका छन् । केन्द्रमा २१ आईसीयू, १५ भेन्टिलेटर, ४७ एचडीयू र २८ जेनेरल शय्या छन् । अस्पतालका अनुसार ४ संक्रमित जेनेरल शय्यामा भर्ना भएका छन् । यस्तै, कोसी अस्पतालको आईसीयूमा २० र भेन्टिलेटरमा ५ जना बिरामी भर्ना छन् ।
झापाको मेची अस्पतालको एचडीयूमा २३ र जेनेरलमा १५ गरी ३८ जना उपचाररत छन् । अस्पतालमा ५८ जेनेरल, ४ आईसीयू, ५ भेन्टिलेटर, ५० एचडीयू गरी कुल १ सय १७ शय्या छन् । विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालको कोभिड वार्डमा आईसीयूमा १ र एचडीयूमा २ गरी ३ जना उपचाररत छन् । अस्पतालमा ८२ आईसीयू, २९ भेन्टिलेटर, १ सय १५ एचडीयू बेड छन् । यस्तै, विराट शिक्षण अस्पतालको कोभिड वार्डअन्तर्गत ४० संक्रमित उपचाररत छन् । अस्पतालमा ३३ आईसीयू, १७ भेन्टिलेटर र ९३ एचडीयू गरी १ सय २६ शय्या छन् । न्युरो अस्पतालमा १९ संक्रमित उपचाररत छन् ।
झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी अस्पतालका २ सय शय्यामध्ये ३३ मा बिरामी छन् । त्यस्तै, सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड–१९ अस्पतालमा पनि एक सातायता उपचार गराउन आउने संक्रमितको संख्या बढेको छ । प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चूडामणि पोखरेलका अनुसार हाल ५९ संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
प्रदेश २ मा पनि बढ्दो
स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश २ मा संक्रमितको संख्या सातायता थपघट भइरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा पीसीआर परीक्षण गराउनेको संख्या न्यून छ । तर, भाइरसको जस्तो लक्षण देखिएका बिरामीको अस्पताल र क्लिनिकमा भने भीड बढेको छ । वीरगन्जको नारायणी अस्पताल र तराई अस्पतालमा १/१ संक्रमित उपचारत छन् । प्रदेशभर बुधबार जम्मा १८ संक्रमित थपिएका छन् ।
वाग्मतीमा दैनिक संक्रमण बढ्यो
वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक) का जिल्लामा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । मकवानपुरमा बुधबार थप ६७ जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । जिल्लामा पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ५९ जनामा पीसीआर र ७४ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा क्रमशः ५१ जना र १६ जना गरी थप ६७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रणय उपाध्यायले बताए । मंगलबार ६६ संक्रमित थपिएका थिए । जिल्लामा हाल ५ सय ५२ संक्रमित छन् । तीमध्ये हेटौंडा अस्पतालमा २८ जना उपचाररत रहेका हेटौंडा अस्पतालका अध्यक्ष राजेश प्रसाईंले बताए ।
यसैगरी चितवनमा संक्रमितको संख्या असार दोस्रो सातायता निरन्तर बढ्दो छ । चितवन स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार १ सय १३ जना संक्रमितको भरतपुरका सरकारी र शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । भरतपुर अस्पतालका डा. प्रमोद पौडेल अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढ्न थालेको बताउँछन् । काभ्रेमा साउन १ यता ६ सय ९९ संक्रमित थपिएका छन् । तीमध्ये ५६ जना बुधबार थपिएका हुन् । धुलिखेल अस्पतालका आकस्मिक सेवा विभाग प्रमुख डा. सानुकृष्ण श्रेष्ठले अस्पतालमा ३५ संक्रमित भर्ना भएका बताए ।
यस्तै, सिन्धुलीमा साताअघि शून्यमा झरेको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणको ४० प्रतिशत हाराहारीमा नतिजा पोजिटिभ आएको छ । सिन्धुलीमाढीको कोभिड अस्पतालमा ४५ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
गण्डकीमा अस्पताल भरिँदै
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोभिड आईसीयू खाली छैन । कोभिड बिरामीका लागि ८५ बेड छुट्याइएको छ । तीमध्ये २५ आईसीयू रहेकामा सबै भरिएका हुन् । बुधबारसम्म ३९ एचडीयू बेड पनि भरिएका छन् । आइसोलेसनका २१ मध्ये १० वटामा संक्रमित छन् । पछिल्लो दुई सातायता संक्रमितको संख्या क्रमिक रूपमा बढेको अस्पतालका कोभिड फोकल व्यक्ति डा. डेभिड श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश सरकारले पोखराकै सिसुवामा सञ्चालन गरेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि संक्रमित भरिएका छन् । अस्पतालमा ५७ बेड छन् । तीमध्ये ७ वटै आईसीयू बेड खाली छैनन् । १५ आइसोलेसन बेड सबै भरिएका छन् । ३५ एचडीयू बेडमध्ये १० वटा मात्रै खाली रहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.विकास गौचनले बताए । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार पोखरा निजी अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार ८ सय ४५ छन् । तीमध्ये ३ हजार ५ सय २३ होम आइसोलेसनमा छन् ।
संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजनसहितका बेड निर्माण सुरु गरिएको छ । बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठकका अनुसार विशेष अस्पतालमा अहिले ५३ बिरामी उपचाररत छन् । अस्पतालमा आईसीयूमा २० बेड क्षमता रहेकामा १७, कोभिड मेडिकल वार्डमा २३ मध्ये २० र आकस्मिकमा सबै १३ बेडमा संक्रमित छन् ।भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा हाल १२ जनाको उपचार भइरहेको सूचना अधिकारी डा. सिद्धार्थ पाण्डेले बताए ।
दाङको बेलझुन्डी अस्पतालमा ६ जना उपचाररत रहेका छन् । जिल्लामा उपचाररत संक्रमितको संख्या २० रहेको अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण वलीले बताए । अस्पतालमा संक्रमितका लागि १ सय बेड छुट्याइएको छ । नेपालगन्जको भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले अस्पतालमा २२ संक्रमित रहेको जनाए ।
कर्णालीमा अधिकांश होम आइसोलेसनमा
कर्णालीका हिमाली जिल्लामा समेत संक्रमण फैलिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार अहिले कर्णालीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ सय ३४ छ । तीमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसनमा छन् । सबैभन्दा बढी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा २७ जना र त्यसपछि सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा १५ संक्रमित छन् । कर्णाली प्रदेश अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. केएन पौडेलले पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढे पनि अस्पतालमा भर्ना हुने कम रहेको बताए । उनका अनुसार प्रदेश अस्पतालको कोभिड विशेष अस्पतालमा २ सय संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्न सकिन्छ ।
सुदूरपश्चिममा अस्पताल जाने कम
सुदूरपश्चिममा पनि केही दिनयता संक्रमण बढेको छ । तर, विगतजस्तै गम्भीर खालका बिरामीको संख्या भने न्यून छ । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बुधबारसम्म २० जनाको उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठका अनुसार तीमध्ये २ जना बुधबार भर्ना भएका हुन् ।
प्रदेशकै दोस्रो ठूलो अस्पताल महाकाली प्रादेशिक अस्पताल कञ्चनपुरमा २ संक्रमित उपचाररत छन् । सेती अस्पताल धनगढीमा संक्रमितका लागि ७९ बेड छन् । कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा ५० बेड छन् । महाकाली र कैलालीको टीकापुरमा ५० बेड थप्ने तयारी भइरहेको छ । बझाङ, बाजुरा, अछाम, दार्चुला, बैतडी र डोटीलगायत जिल्लामा हालसम्म कोरोनाका बिरामीका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा १० बेड छन् ।
-देवनारायण साह (मोरङ), प्रदीप मेन्याङ्बो (सुनसरी), अजित तिवारी (जनकपुर), प्रताप विष्ट (हेटौंडा), रमेशकुमार पौडेल (चितवन), नगेन्द्र अधिकारी (काभ्रे), राजकुमार कार्की (सिन्धुली), दीपक परियार (पोखरा), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), दुर्गालाल केसी (दाङ), ठाकुरसिंह थारू (नेपालगन्ज), चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर) र चित्रांग थापा (धनगढी)
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ १२:०६
बाढीपहिरोले जताततै सडक क्षतविक्षत
असार २०, २०७८ प्रदेश ब्युरो
हेटौंडा — लगातारको वर्षापछिको बाढीपहिरोले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मुख्य राजमार्ग र ग्रामीण सडकमा धेरै क्षति पुगेको छ । कतै सडक नै बगाएको छ भने कतै पहिरो खसेर यातायात अवरुद्ध भएको छ । खसेको पहिरो पन्छाएपछि केही सडक खण्डमा आवागमन पुनः सुरु भए पनि केही सडक भने पछिल्लो तीन दिनदेखि ठप्प छन् ।
काभ्रेको नमोबुद्ध–५ लास्कोटस्थित खानी तथा क्रसर उद्योगबाट निस्किएको धुलो पानीले बगाएर ल्याउँदा बीपी राजमार्गमा फसेका सवारीसाधन । तस्बिर : नगेन्द्र अधिकारी/कान्तिपुर
मकवानपुर र चितवनका पहाडी भेगमा पर्ने चेपाङ बस्तीहरूसम्म पुग्ने मोटरबाटो क्षतविक्षत भएको छ । मकवानपुरको उत्तरपश्चिममा पर्ने राक्सिराङ गाउँपालिकाको केन्द्र चैनपुर जाने सडक अवरुद्ध छ । मनहरीदेखिको सडक ठाउँठाउँमा पहिराले बगाएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । मनहरीबाट चैनपुर ७ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । मकवानपुरकै अर्को दुर्गम कैलाश गाउँपालिकाको केन्द्र कटुञ्जे पुग्ने मोटरबाटो पनि ठाउँठाउँमा गएको पहिरोले ठप्प छ । कटुञ्जे त्रिभुवन राजपथको चुनियाबाट २२ किमि दूरीमा पर्छ । यो सडकमा विगत ३ दिनदेखि यातायात सेवा अवरुद्ध रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तानले बताए । ‘चुनियाबाट प्रवेश गर्ने बितिक्कै ठूलो पहिरो खसेको छ, जसले सडक नै ताछेर लगेको छ,’ उनले भने, ‘नामटार नजिक सडक बगाएको छ भने घुमाउनेमा पनि क्षतविक्षत छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानीमा उक्त सडकको स्तरोन्नति भइरहेको थियो ।
यसैगरी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि पूर्वी चितवनको उत्तरी क्षेत्रका पहाडी गाउँ र धादिङ जोड्ने भण्डारा–मलेखु चेपाङ मार्ग पनि पहिरोले क्षतिग्रस्त छ । यसको लम्बाइ ६८ किमि छ । बिहीबारको वर्षासँगैको पहिरोले सडकको चितवनतर्फको अधिकांश भागमा क्षति पुर्‍याएको राप्ती–१३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर चेपाङले बताए । ‘पाइला पाइलामा पहिरो गएर सडक बिग्रिएको छ । केही ठाउँमा सम्हाल्नै नसकिने गरेर बाटो भत्केको छ,’ उनले भने । यो मार्गले कोराक र लोथरका साथै राक्सिराङ क्षेत्रमा पनि सहज रूपमा यातायात सुविधा पुगेको थियो । अहिले ट्र्याक खोल्ने काम सकिनुका साथै भण्डारातर्फ ५ किमि र मलेखुतर्फ ८ किमि सडक कालोपत्रे पनि भएको छ । ‘बजेट वार्षिक रूपमा आउने गर्छ तर धेरै आउँदैन । यो वर्ष ५ करोड रुपैयाँ आएको थियो । त्यसैले सकेको काम गर्दै आएका थियौं । अर्को वर्ष २० करोड रुपैयाँ आउँदै थियो,’ डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर विजय दराईले भने । पहिरोका कारण कालोपत्र भएको स्थानभन्दा केही पर आँपपानीसम्म जनतन गाडी जान सक्छन् । त्यसपछि गाडी वारपार गर्नै नसक्ने गरेर बाटो बिग्रेको वडाध्यक्ष चेपाङले बताए ।
उक्त सडकमा पहिरो व्यापक छ भन्ने जानकारी कार्यालयमा आएको तर तत्काल केही काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको इन्जिनियर दराईको भनाइ छ । ‘पहाडी गाउँ जान सकस छ । तर अहिले सबै औजार, उपकरणहरू नारायणगढ–मुग्लिङ सडक र पृथ्वी राजमार्गको पहिरो हटाउन परिचालित छन् । तत्काल त्यता डोजर, लोडर पठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने ।
बनेको एक महिनामै सडक क्षतिग्रस्त
लगातारको वर्षापछिको बाढीका कारण बनेको एक महिनामै कालोपत्र सडक क्षतिग्रस्त भएको छ । दुधौली–लखिमा–अरुण ठाकुर जोड्ने १८ किलोमिटर सडकमध्ये ३ किमि खण्डमा क्षति पुगेको हो । डहरे, कामीटार र वामदहमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न नमिल्ने गरी कालोपत्रे सडक बाढीले ध्वस्त बनाएको हो । ‘सडक कालोपत्रसँगै दुधौलीबाट तीन घण्टाको कष्टप्रद यात्रा छोटिएर आधा घण्टामा झरेको थियो । अब त सडक कहिले बन्ने हो अनिश्चित भएको छ,’ स्थानीय शरद बुढाथोकीले भने । सडक निर्माण कम्पनी ईसीआई–कन्काई कन्स्ट्रक्सनका क्षेत्र बम्जनले भिरोलो क्षेत्रको सडक बाढी आउँदा खोल्सामा राखेको कलभर्ट टालिएर क्षतविक्षत भएको बताए ।
चार राजमार्गका १० ठाउँमा पहिरो
अविरल वर्षाका कारण शुक्रबार राति हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने चार राजमार्गका विभिन्न १० स्थानमा पहिरो खसेको छ । मकवानपुर प्रहरीका अनुसार त्रिभुवन राजपथ, कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौं सडक, कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं छोटो मार्ग र कान्ति लोकपथका विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्दा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको थियो । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत भीमफेदी–१ बाघझोरा, भैंसे–पालुङ–नौबिसे सडक खण्डमा पर्ने भीमफेदी–९ अघोर, थाहा–६ खानीगाउँ र थाहा–१२ गैरीगाउँमा पहिरो खसेको थियो ।
शनिबार साँझसम्म यी सबै स्थानको पहिरो हटाएर एकतर्फी आवागमन गराइएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता देवेन्द्र दासले बताए । कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौं छोटो मार्गको भीमफेदी–२ पान्द्राङ, भीमफेदी–६ देउराली, कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं सडकअन्तर्गत इन्द्रसरोवर–४ महालक्ष्मीखोला, इन्द्रसरोवर–२ कुलेखानीमा पनि पहिरो जाँदा सडक आवागमन अवरुद्ध छ । ‘यो सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेका कारण पनि धेरै स्थानमा पहिरो खसेको हो,’ दासले भने । कान्ति लोकपथअन्तर्गत भीमफेदी–८ गंगटेमा पहिरोले कालोपत्र बगाउँदा राजमार्ग नै पूर्णरूपमा बन्द भएको छ ।
प्रकाशित : असार २०, २०७८ ०८:१०